မဟုတ်ဘူး! LEGO အုတ်များသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပင်စျေးကြီးသည်
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 277 Views စာ0မှတ်ချက် 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, Boba fett, ကို C-3PO, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Ninjago, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
စာရေးဆရာနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Lego အုတ်များသည်စျေးကွက်ထဲတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များပြားသောငွေများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
ငါတို့ကအသစ်အဆန်းကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ် အုတ်တွေနဲ့ဖြေပါ - ငါတို့တစ်ခါမှမကြိုးစားဖူးဘူး၊ မမြင်ဖူးဘူး။ မင်း houmous (သို့) သရက်သီးကိုပထမဆုံးမြည်းစမ်းကြည့်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ထောပတ်သီးတစ်လုံးကိုမျက်လုံးကိုပုတ်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးသဲလွန်စမရှိခဲ့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်အားလုံးသည်ထိုအရာများနှင့်လုံးလုံးလျားလျားရင်းနှီးနေပြီ၊ အုတ်နှင့်လည်းတူသည်။
ငါတို့ကိုင်လို့ရတဲ့ပတ္တာအားလုံးကိုငါတို့တွေ့ပြီးပြီ။ ကြွေပြားများ၊ SNOTs များ (studs-not-on-top)-သို့သော်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသော drum drum * အစုံတွင်အပိုင်းအစတစ်ခုစီပါလာသည်။
ကံကောင်းစွာနဲ့ငါ့မှာ AFOLWAC (လူကြီးပရိတ်သတ်တွေရှိတယ် Lego Chums (ဘယ်သူတွေလဲ) ဤအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူဖြစ်သည်။ သူကပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ် Lego မှပြီးတော့ငါတို့ RWB အတွက်လုံးဝအသစ်စက်စက်အုတ်တစ်ချပ်ရှိတယ်လို့ငါထင်တဲ့အခါတိုင်းသူ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုငါခေါ်တယ်။ ယခုအပတ်တွင်သူသည် pods များနှင့် Trolls: World Tour set, clam shell နှင့် claw တို့မှဆက်ဆံခဲ့သည်။ 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်းပြီးတော့ငါအဲဒါကိုနာမည်တောင်မသေချာသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်အသစ်တစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အပိုင်းအစအကြောင်းငါ့ကိုပြောဖို့သူ့ကိုအသက်ရှုသံနဲ့စောင့်နေတယ်။
ဒါကငါ့ကိုရှားပါး p အကြောင်းစဉ်းစားစေခဲ့တယ်artယေဘုယျအားဖြင့်အစုံများမှ ငါလက်ရှိငါထောင်စုနှစ် ၁၀၁၇၉ Falcon ကိုငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းနဲ့ငါလုပ်နေပြီးစျေးအရမ်းကြီးတဲ့အပိုင်းနှစ်ကြောင်းကိုတိုတိုနဲ့ဖမ်းမိတယ်၊ အဲဒါကို ၀ ယ်ဖို့အကြောင်းပြရခက်တယ်။ ငါပထမဆုံး startလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကဒီစီမံကိန်းကို ed၊ ၃ × ၂၈ အကြံအဖန်လှေတစ်စင်းရွက်တိုင် ၄၇၉၉၆ ကိုရှာဖို့ငါအွန်လိုင်းကိုသွားခဲ့တယ်။ အဆောက်အ ဦး ရဲ့ကျောဘက်မှာနှစ်ခုလိုအပ်တယ်။ သူတို့ကိုငါမရခဲ့ဘူး။ ၎င်းတို့ကို eBay တွင်ပေါင် ၂၀၀ စီဖြင့်သာရနိုင်သည်။
အဲဒီအစား Batcave set ကနေထုတ်ထားတဲ့ရွှေရှည်မီးသတ်သမားတွေနဲ့ငါပြုပြင်ပြီးပြီ။ သူတို့ကအလွန့်အလွန်ကြည့်ကောင်းပြီး၊ ငါ Millennium Falcon ကိုမဖန်တီးတာ၊ Liza Minnellium Falcon ကိုငါလုပ်တယ်၊ သူတို့ကတည်ဆောက်မှုကိုလုံး ၀ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ အခုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ သင်မူလအကြံအဖန်ကိုရယူနိုင်သည် အုတ်ခဲ များစွာသက်သာသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရွှေတိုင်များနှင့်တွယ်ကပ်နေသော်လည်း)
ဒေါသထွက်စရာကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ရောင်းချသောစျေးကွက်တစ်ခုရှိနေတာကိုငါနည်းနည်းအံ့မိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက Lego ငါတို့ပြောနေတာကဒုတိယစျေးကွက်ကအမြင့်ဆုံးနေရာကိုစိုးမိုးနေတယ်။ မင်းစိတ်ထဲမှာဒီအစုကြီးရှိရင်မင်းဘယ် p ကိုသိဖို့ထိုက်တန်လိမ့်မယ်artမင်းကကံဇာတာသေးသေးလေးတစ်ခုမှာထိုင်နေရင်တောင် s ကိုအကြီးအကျယ်လိုက်ရှာနေတယ်။
မကြာခဏပြောလေ့ရှိပါတယ် Lego ရွှေထက်စျေးပိုကြီးသည်၊ ၎င်းသည်အချို့ဖြစ်သည် Lego အုတ်များသည်အခြားသူများထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ 70644 Metal ကိုယူပါ နည်းပညာ ချိတ်ကြီး။ ၎င်းကို ၂၀၀၉ တွင်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပေါင် ၁၀ အသစ်ပြန်ပေးလိမ့်မည် အုတ်ခဲမရ။ သို့မဟုတ် 24201 Slope၊ Curved2× 1 သို့ပြောင်းပြန်လှန်ပါ။ သင်စဉ်းစားနိုင်လောက်သည်၊ သို့သော်စိမ်းပြာရောင်ကို 2018's 41632 Homer Simpson & Krusty the Clown တွင်သာရနိုင်သည်၊ ယခုမှစတင်သည်။ £ ၉-၂၁ အသစ်ဒါမှမဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်နီးပါး set တစ်ခုလုံး.
ဒါမှမဟုတ် ၂၀၀၇ မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာက ၂၅၇၃ ဧရာမမာကျောတဲ့ပလပ်စတစ်ဘီးနောက်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မီးခိုးရောင်ဗားရှင်း startအသစ်ကပေါင် ၂၀ မှာရှိပြီးသင်ဆောက်သမျှအတွက်ဘီးတစ်ခုထက်ပိုလိုအပ်လိမ့်မယ်။ 20 × 48 Baseplate တစ်ခုလိုချင်သည် အစိမ်းရောင်? အဲဒါကမင်းကိုပေါင် ၃၅ ပြန်ပေးလိမ့်မယ်။ နှိမ့်ချပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအုတ် ၃၀၆၃ ကိုသတိရသည်။ ၎င်းသည်သဲအစိမ်းရောင် ၀ န်းကျင် 35 × 3063 ထောင့်အုတ်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရန်အထွေအထူးမရှိပါ၊ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်းယခုကုန်ကျစရိတ် £ 65 အသစ်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရှားပါး minifigures တွေဆီကိုရောက်တဲ့အခါဒီအရာတွေအားလုံးဟာအရေးမပါတာကိုအရောင်မှိန်သွားစေတယ်။ တိမ်တိုက် City Boba Fett သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှဖြစ်သည် ယခုတန်ဖိုးရှိ ပေါင် ၁၃၀၀ အသစ် (သို့) ပေါင် ၃၉၀ သုံးသည်။ ၂၀၀၇ မှာရွှေချထားတဲ့ C-1,300PO ရှိတယ် start£ 870 မှာ မူလအိတ်ထဲတွင်တံဆိပ်ခတ်ထားသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးကိုအနိုင်ယူရန်အသေးအဖွဲမှာမစ္စတာရွှေဖြစ်သည်။ ဟိ Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏ Gold minifigures ၅၀၀၀ ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းသင်တစ် ဦး ရရန်ကံကောင်းခဲ့လျှင်ဂုဏ်ယူပါ။ အခုတော့တန်ပါပြီ ပေါင် ၃၅၀၀ အထက် တံဆိပ်ခတ်။
လူကြီးပရိတ်သတ်များစွာအတွက် Lego တည်ဆောက်မှုထက်ဘာမှမပိုပါ၊ သို့သော်သင်၏နေရာအတွက်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည် အသစ်အစုံ ကုန်သွားပြီ။ မင်းကသူ့စုဆောင်းမှုကိုသိမ်းထားဖို့နောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးကို ၀ ယ်ခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့တူတာမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့ပြန်လည်အကဲဖြတ်မှုကိုစဉ်းစားပြီးအဲဒါတွေကိုရွှေ့ပစ်ဖို့စဉ်းစားချင်လိမ့်မယ်။
၏ဂုဏ်အသရေ Lego ၎င်းသည်တန်ဖိုးမြင့်တက်သည်ကိုသင်မသိပါ၊ သင်သည်ရိုးရှင်းသောအပိုင်းအစများကြားတွင်သေးငယ်သည့်ဘဏ္asuresာများပေါ်တွင်ထိုင်နေနိုင်သည်။ သူတို့ဆီမှာရွှေတွေအုတ်တွေရှိတယ်။
အထူးပုံရိပ်နောက်ခံ: ဘင်ဂျမင် D. Esham
← LEGO NINJAGO 71750 Lloyd's Hydro Mech သည်မူလကအလွန်ခြားနားသည်
Lego Star Wars: Skywalker Saga သတင်းကနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာတယ် →